पत्रपत्रिका – Page 615 – Etajakhabar
बेलायती उच्च अधिकारी काठमाडौंमा
काठमाडौं, जेठ २६- बेलायतका दुई जना अधिकारी नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा मंगलबार काठमाडौं आएका छन् । बेलायती विदेश मन्त्रालयका पर्मानेन्ट अन्डर सेक्रेटरी सर साइमन म्याकडीनाल्ड र बेलायती अन्तार्राष्ट्रिय विकास मन्त्रालयका पर्मानेन्ट सेक्रेटरी मार्क लोकक काठमाडौं आएका हुन् । बेलायती अधिकारीले मंगलबारै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग सिंहदरबारमा भेट गरेका छन् । बेलायतले डीएफआईडीमार्फत नेपाललाई २०१८ ...
सीमास्तम्भ नेपालले बनायो, भारतले बनाउन बाँकी
काठमाडौं, जेठ २६ – नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण ३ नम्बर नापी टोलीले रुपन्देहीदेखि दाङका तीन सय ११ वटा सीमास्तम्भ मर्मत एवं पुनर्निर्माण गरेको छ । १३ वटा जोर नम्बरमा पिलर नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्थामा छन् । उक्त पिलर निर्माण गर्ने काम भारतीय पक्षको जिम्मामा परेको छ । नेपाल मारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्र दसगजामा रहेको भारतद्वारा अतिक्रमित एवं विवादित क्षेत्र सुस्तास्थित चार सय ९७ जंगी पिलर छ...
काठमाडौं, जेठ २६ - ‘म अझै पनि बाँच्छु। मलाई अरु २÷३ वर्ष बाँच्ने इच्छा छ। २÷३ वर्ष अझै बाँचेर संगीतकै लागि काम गर्नु छ।’ गीतकार, संगीतकार तथा गायकको लोभलाग्दो छवि बनाएका सांगीतिज्ञ अम्बरका अमर तारा अम्बर गुरुङ पछिल्लो समय घर परिवारका सदस्यसँग यसै भन्थे। ‘मलाई अरु २÷३ वर्ष बाँच्ने इन्छा छ। २÷३ वर्ष अझै बाँचेर संगीतकै लागि काम गर्नु छ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ केही वर्षको जीवनका लागि आशावादी हुनुहुन्थ...
काठमाडौं, जेठ २६ - तराईका जिल्लामा घरजग्गा तथा रियल इस्टेट कारोबारमा शतप्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ। मधेस आन्दोलनबाट बढी प्रभावित ८ वटा जिल्लाको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तथा घर/भवन स्थायी नक्सा पास शून्यबराबर भएको हो। कारोबार दैनिकमा समाचार छ। नेपाल राष्ट्र बैँकले चालू आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को पहिलो ६ महिनाको आर्थिक गतिविधि अध्ययन गरी जारी गरेको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार समग्र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन सं...
काठमाडौं, जेठ २६- लगातार तीन वर्ष आयव्यय नबुझाउने २० दल खारेजीको प्रक्रियामा पुगेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ सम्म लगातार तीन वर्षसम्म आम्दानी खर्चको विवरण नबुझाउँदा खारेजी प्रक्रियामा गएका हुन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ। निर्वाचन आयोगले पटक पटक पत्र पठाएर आयव्यय विवरणको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माग गर्दा समेत अटेर गरेपछि प्रक्रिया अगाडी बढाइएको हो। आयोगमा दर्ता रहेका दलले प्रत्येक वर्षको आम्दानी...
काठमाडौं, जेठ २६- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका ११ जना न्यायाधीशविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन पेसीमा नचढाउने कार्य उचित नभएको बताएका छन्। नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ। सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता र कांग्रेस समर्थित कानुन व्यवसायीहरुबीच भएको बैठकमा सिफारिसमा भएका ११ जना न्यायाधीशविरुद्ध परेको रिट निवेदन लामो समयसम्म पनि पेसीमा नचढाउने...
काठमाडौं–डन गणेश लामाले गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतसँग यस्तो पहुँच बनाएका छन् कि ? कसैले पत्याउँदैनन् । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का केन्द्रीय सदस्य रहेका लामा उक्त पार्टीमा असुरक्षित महसुस गरेपछि माओवादी छिर्ने तयारीमा लागेका छन् । काभ्रेमा माओवादी नेता लालध्वजमार्फत उनले पार्टीका ठूला नेताहरुसँग भेटघाट गरी सुधार सम्बन्ध बनाएका छन् । ती नेताहरुमार्फत लामाले गृहमन्त्रीसम्म समेत आफ्नो पहुँच...
डन र तस्करको घेरामा गृहमन्त्री
काठमाडौं, २५ जेठ । गलत व्यक्तिहरुको घनिष्टता तथा कार्यक्षमताको अभावमा गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको पद धरापमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री परिवर्तन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रस्ताव राखिसकेका छन् । आफ्नो सोचअनुसार गृहमन्त्री बस्नेतले काम गर्न नसकेको भन्दै ओलीले गहृमन्त्री फेर्ने प्रस्ताव राखेको स्रोत बताउँछ । कमजोर निर्णय क्षमता र प्रशासनिक ानको अभावका...
एमाले–माओवादी कुरा मिल्यो, यस्तो रहेछ कुरा
काठमाडौं, २५ जेठ । ‘सरकार परिवर्तनका विषयमा कसैसँग कुनै गोप्य वा भद्र सहमति भएको छैन । बाहिर आएका चर्चा र हल्ला आधारहिन छन् । यो सरकार आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा प्रतिबद्व भएर अघि बढिरहेको छ,’ बालुवाटारमा शनिबार बसेको स्थायी कमिटि बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भन्दै गर्दा प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको पनि बैठक चलिरहेको थियो । उक्त बैठकमा माओवादी ...
नयाँ शक्तिको सडकमा आफ्नै ट्राफिक !
काठमाडौं, २५ जेठ । नयाँ शक्ति नेपालले ३० जेठमा गर्न लागेको पार्टी स्थापना घोषणा कार्यक्रममा आफ्नै ट्राफिक सडकमा खटाउने भएको छ । संविधान जारी भएसँगै एमाओवादी त्यागेर छुट्टै पार्टी गठन अभियानमा लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टरार्य नेतृत्वको नयाँ शक्तिले सो दिन शान्ति सुरक्षाका लागि आफ्नै स्वयंसेवक खटाउन तयारी गरेको हो । ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पूर्वएआईजी तथा पूर्वट्राफिक प्रहरी प्...
Previous 1 … 614 615 616 … 672 Next
-20060 second ago